Tuugada oo wax ka badala warqadaha biilasha | Somaliska
Beryahaan dambe waxaa soo batay tuugo ka qaraabata sanduuqa boostada, iyagoo la baxa warqadaha biilasha ay soo diraan shirkadaha, ka dibna isbedal ku sameeya.
Qiyaanada ayaa ah in ay tuugadu la baxaan warqada biilka ay soo diraan shirdaha doonaya in uu qofku lacagta soo bixiyo. Tuugada ayaa wax ka soo badala koontada lacagta lagu shubayo iyagoo markaas warqad cusub qofka u soo tuura. Arintaas ayaa keentay in dadka qaar ay lacagta u diraan tuugada.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah tuugada ayaa waxay sameeyaan in ay iskood u soo dirsadaan warqado biil ah adiga oo aan waxba ka dalban. Tuugadaan ayaa waxay abuuraan shirkado been abuur ah iyagoo faktuurooyin badan u diray shacabta Sweden, arintaas ayaa keentay in dad badan ay lacag u soo shubaan tuukada.
Beryahaan dambe ayaa waxaa soo batay qiyaanooyinka ay sameynayaan tuugada ku qaraabada qiyaanada biilasha iyo internetka. Dad badan ayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxaa sidoo kale lagu qiyaanay ka dib markii kombutarkooda Virus lagu shubay ka dhibna ay u soo baxday fariin u muuqada in ay ka timid Booliska oo qofka lagu leeyahay “waa lagu ganaaxay” taas ayaa sidoo kale keentay in dad badan ay lacago ganaax been ah bixiyaan. Booliska ayaa sheegay in aysan dadka qaabkaas ganaax ugu dirin.
Si aad isaga ilaaliso in lagugu qiyaano warqadaha biilasha ayaa waxaa haboon in aad lacagta kirada, korontada iwm aad ku bixiso waxa loo yaqaan “E-faktura ama Autogiro. Sidoo kale iska fiiri koontada la socota warqada iyo magaca shirkada in ay isleeyihiin.
Asc bahda somaliska waan salaamaa salaan ka dib waa jirtaa waana arkey anayba igu dhacday in computerka iga xirmay kuna qoran tahay astaanta poliska anoo yaaban ayaa asxaabata ii sheegeen poliska aan wacay waxayna ii sheegeen inaysan waxaas jirin hadaad lacagta dhiibtayna noo soodir serial numberka waxayna wax ku dalbanayaan tuugad wax loo yaqaan e cash sidaan umalaynaayo macgaca waxaana uu ka kooban yahay 16 number ilaa 12 number marka waa degiin somaliyee waana mahadsan tihiin
Abdirizak rån Eskils says:
Sheekadaaasi aniga ayey igu dhacday niman baa isoo diray motor lottory waxa saa soo kale ah ay leeyihin ka dibna uma jawaabin. ayaama ka dib waxaba isoo diree inkasso ay leeyihin kronofogen baad galaysaa waan la hadlay lanbar mesha ku yaal. waxay ku leeyihin bixin intaanad gelin.. ILAAHAY AMARKI. waan shakiyey inkasso nooc kale ah bay ahayd oo yar duwan. ka dib baadhid baan galay GOOGLE waxan ogaaday shirkadani jirin INKASSO lacag isoo dirin, e iyago INKASSO jeebkeedo ah ay tahay.. WAXAANAD KU GARAN KARTAA INKASSO INRUM KA BANKGIRO IYO BANKGIRO AMA PLUSGIRO ISKU MID MAAHA. XITAA WEBSITE KHIYAALI AH BAY LEEYIHIN.. marka qofka haddaanu wax fahansayn hore u kala saari maayo.. WAA BILAAHI TOWFIIQ. soomaali badan ayey direen..
bismilaah ala walaalayaal waad mahadsan tihiin jimcaale sidoo kale marka anigana waan isjiraa walaal nala soo socodsii aqbaar kasta ood maqasho mahadsanidiin
sxb waxan u baahan talo inad isiiso marka sxb waxan raba inad iso qorto ciwan an kala so xidhiidho ok bro thnx
Asc dhaman akhyaata, intaas ka bacdi anigana waa igu dhacday arintaan waxaa computerka iigu soo dhacay wax dhahaayo polis ayaa nahay waxaana deganahay Börås qalad ayaana sameysay waxaa fiirisay sex oo ungdom ,ah waxaana jibisay sharci Sverige förbud ka,ah sidaas daraadeed waxaa mudan tahay 12 sano oo xarig,ah ama 100,000 euro laakiin waxaa laga yaabaa in ey marki kugu horeysay tahay ama aadan wadanka wax badan kala socon marka waxaan hada ganaaxaaga ka dhignay 1500 kron hadii aadan 24 sac kudeheed ku bixina waxaan ku direynaa krminlsystem. marka waan yaabay waxaana fiirinaaye marki ey sidaas dheceysay ciyaar dhexmareysay manchester city iyo realmadrid. wax aan sameeyo ayaan waaye computerkina waa iska key xiray kamirana waa soo shidan tahay oo i sawireysa marka ey igu soo aado aniga dhan argagax ayaa igu dhacay habiin ayay aheyd ee waan iska seexday subaxdi ayaan poliska ku hiireestay computerkana waan qaaday marki aan u tegay ayaan ku dhahay maxaa igu heysataan oo aa waxaan iigu soo dirteen aniga hee ciyaar ayaan daawanaayee ma ciyaara aan la ogoleyn ayaa jira hadiisa ey jiraan maxaa digniin la ii siin waaye ma la iska key ganaaxaa ama dinbiila ayaa basiid la iiga dhigaa, marka waaba ila yaabeen anaga waxaan ma lihin ey igu dheheen hadii aa dinbi gashana meeshaada ayaan kugu imaa heynaa maahee computer iyo wax la mida ma samey heyno ee verius waaye ee meel internett kale tag ee dib u habeyn ku samey ka bacdina ok ayow ku noqonaayaa dadka kale oo saaxibadaa,ana u sheeg marka akhaayerey yaan la deg degin oo waxaa samey heysaan ha laga fiirsado.
jaabir yare says:
September 30, 2012 at 01:32
asc all aduunka meyl roon male meyl walba tuuug lee buuxo whli waa yaab hadii arintaas ay dowlada sweden wax ka qabanayn tuugada maxaa la samaynaa why anaga waaba fahanay arinta sida u socoto lkn waxaa jiraa dad kale oo da.da waa weyn marka sidee logu shegaa waaye marka hadiiba boliska ay dad badan arintaas ula tageen maxay bolis afkooda shib u yhy bay soo fariistaa tv 4 . mise iyada ayaaba shaki ka qabaa oo ku jiro u malaynaa dad tuuugo ah why ay arintaan shib ugu dhaheen ?????